China High mmepụta 9KW 300L / min Djá nkpuchi Ime Machine factory na-emepụta | Ikike
Ngwongwo Akụrụngwa Medical
Ofụri Esịt auto ọgwụ nkpuchi igwe
Ofụri Esịt auto ntị loop ịgbado ọkụ igwe
Igwe zuru oke nke mkpuchi mkpuchi ahụike na-enweghị ịgbado ọkụ
Sooks mwekota Machine
Igwe Taya Valve
Mkpọchi Ime Machine
Industrial Socket Assembly igwe
Waya iku na soldering Tin ngwá
Akpaaka na-ekesa igwe
Relay na kọntaktị mmepụta akara
AKWKWỌ AKW IKWỌ
High mmepụta 9KW 300L / min ustjá Nkpuchi Ime Machine
Usoro njikwa: Njikwa PLC
Weigtht: banyere 2Ton
Ihu nkpuchi ihu: 3-4 oyi akwa
Oghere nkpuchi Ndinam igwe. Ọ bụ igwe eji eme ihe n'ihu ihu maka imepụta ihe eji ekpuchi ihu, ọ bụ igwe akụrụngwa zuru oke iji mepụta ihe mkpuchi oghere site na ịzụrụ ihe akụrụngwa, ntinye & ịcha waya waya, ịkwa akwa, mkpuchi, mgbado ọkụ ultrasonic na mpempe mpempe. na anakọtara na ebu.
Nkọwapụta nke Nkpuchi Ikpuchi Igwe
220V 60HZ ma ọ bụ ahaziri
300L / nkeji
Mmepụta nkpuchi ihu
Ihe nkpuchi ihu
Ọdịdị mkpuchi ihu
3-4 oyi akwa
Ọrụ nke disposable Nkpuchi Ime Machine:
Igwe a nwere aluminom alloy ogbe. Ọdịdị dị mfe ma mara mma. Ọ nwere ike rụchaa figuring na otu oge na nkenke Ebu. Site na ike dị ike ultrasonic ọ nwere ike ịgbatị na ihe mkpofu ga-emepụta na akpaghị aka. Usoro ihe omume kọmputa na nchọpụta fotoelectric na-eme ka ọ nwee ntụkwasị obi dị elu na oke ọdịda ọdịda. Enwere ike iji ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe mmetọ dị elu, ụlọ ọrụ na mines.
Atụmatụ nke disposable Nkpuchi Ime Machine:
1. ịmụta mbụ German igwe Usoro, kwa atụmatụ nke apịaji nkpuchi, mee ka imi clip na nkpuchi ahu imecha otu ugboro site na akpaka akara site ultrasonic Usoro. Kwụsie ike àgwà na elu arụmọrụ.
2. Nwere ike ime nkpuchi nke 2-5 oyi akwa raw kwa chọrọ.
3. Nke a dị iche na ndị ọzọ mpịachi nkpuchi igwe, a wụnye imi clip ntinye unit: imi clip nwere ike ịtinye mgbe mepụta nkpuchi nke anyị chọrọ, mgbe ahụ n'ogige atụrụ ịgbado ọkụ na-akpụ, a melite akpaaka na-azọpụta ndị na-eri na-eri maka emeputa.
4. PLC akara, akpaka na-agụta, Easy rụọ ọrụ, mara mma imecha ngwaahịa.
5. Servo moto njikwa, akụkụ njikwa kpọmkwem.
6. Igwe e mere site na aluminom, akụkụ ndị ahụ nwere plating, ọhụụ dị mma ma dị mma.
1 Akwụkwọ ikike: 1 afọ site na ụbọchị mbupu. Ọ bụrụ na mmebi ọ bụla n'oge oge Onye Ọrịre kpatara, Onye na-ere ere ga-enyezi mmezi n'efu na saịtị yana nkwụnye ihe akụrụngwa (Nanị akụkụ ngwa ngwa).
2 Onye na-ere ahia na-enye ọrụ nlekọta ndụ ogologo oge, naanị ụgwọ ọrụ ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na gafere oge ikike. Ọ bụrụ na akụkụ mmebi ọ bụla dị mkpa iji dochie anya ya na Onye na-ere ere abụghị ụta, Onye Ahịa nwere ikike ịrịọ maka ego maka ihe eji dochie ya.
3 Onye na-ere ahia ga-aza azịza nkwarụ ọ bụla n'ime awa 4 site na ekwentị, email, na faksị. Maka ọrụ mmezi na mpaghara Fujian n'ime awa 36, ​​na mpụga mpaghara Fujian n'ime elekere 72. Maka ntinye dochie, enwere ike ịmekọrịta oge ahụ ọzọ.
4 Onye na-ere ahia na-enye ọzụzụ maka ndị ọrụ na-akwụghị ụgwọ.
5 Ndi n’ere ahia gha enye kwa ha ihe omuma di nkpa, tinyere ntuziaka banyere ihe aru
Nke gara aga: 1550KG 1 adọ 50-55 PC / Min nkpuchi Manufacturing Machine
Osote: 55pcs / min 6KG / cm2 Mask Manufacturing Machine For Non kpara Mask PLC Control
Q1: you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa?
A1: Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta igwe eji arụ ọrụ na weprovide zuru oke OEM na ọrụ ire ere.
Q2: Olee otu m ga-esi mara na akụrụngwa gị na-arụ ọrụ nke ọma?
A2: Tupu nnyefe, anyị ga-anwale igwe ọrụ ọnọdụ gị.
nkpuchi na-eme akụrụngwa
igwe nkpuchi nkpuchi
abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe
Atọ n'ígwè ịwa ahụ Medical Face Nkpuchi Product ...
10KW 30-40PCS / Min Automatic Face Nkpuchi Ime ...
Medical Mmetọ Nkpuchi Ime Machine na Alum ...
Ofụri Esịt Automatic Disposable Nonwoven 3 Layer Fac ...
40 Ibe / Min N95 Igwe nkpuchi ihu
High Speed ​​Ofụri Esịt Automatic N95 Mask Ime Machine
XIAMEN FRAND NTTRT EGO EGO CO., LTD
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap - AMP Ekwentị
ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, sooks clamping igwe, ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi,